Muxuu Yahay Warka Wanaagsan? | War Wanaagsan
Muxuu Yahay Warka Wanaagsan?
1. Muxuu yahay warkan wanaagsan oo Ilaahay ka yimid?
Ilaahay wuxuu rabaa inay dadku nolol fiican dunida ku noolaadaan. Wuxuu abuuray dhulka iyo wax kastoo ku yaal waayo binuʼaadankuu jecel yahay. Mar dhow wuxuu keeni doonaa isbeddel siduu mustaqbal fiican u siiyo dadka dunida oo dhan ku nool. Wuxuu joojin doonaa waxaa silica sababay.—Akhri Yeremyaah 29:11.
Dowladna ku may guuleysan inay baabbiʼiyaan dulmi, cudurro iyo dhimasho. Laakiinse war wanaagsan baa jira. Mar dhow bay Ilaahay boqortooyadiisu maammulka ka qaadan doontaa dowladaha binuʼaadanka. Oo kuwa xukunkiisa aqbalaa waxay ku raaxaysan doonaan nabad iyo caafimaad fiican.—Akhri Ishacyaah 25:8; 33:24; Daanyeel 2:44.
2. Muxuu warkan wanaagsan maanta muhim u yahay?
Marka keliya ay dhibaatooyinku dhammaan doonaan waa markuu Ilaahay sharfalayaasha dunida ka qaado. (Sefanyaah 2:3) Goormay waxan dhici doonaan? Erayga Ilaahay wuxuu inoo sii sheegay xaalado imminka binuʼaadanka khatargeliya. Xumaanta waqtigan dhacaysa waxay ina tustaa inuu Ilaahay mar dhow wax ka qaban doono xaaladda dunidan.—Akhri 2 Timoteyos 3:1-5.
3. Maxaa waajib ah inaan sameyno?
Waa inaan baranno Erayga Ilaahay Kitaabka Quduuska ah sidaan Ilaahay u baranno. Waxay la mid tahay warqad oo aabbe jacayl badan inoo soo diray. Wuxuu inoo sheegayaa sidaan nolol fiican hadda u helno. Wuxuuna inoo sheegay sidaan nolosha weligeed ah dunida ugu raaxaysan karno. Qaar baan ka helayn inaad heshid caawimo ku fahamsiisa Kitaabka Quduuska ah. Laakiinse mustaqbalka fiican aan heli karno yuunan ku dhaafin.—Akhri Maahmaahyadii 29:25; Muujintii 14:6, 7.
Wadaag Wadaag Muxuu Yahay Warka Wanaagsan?